အကောင်းဆုံး Wineries ပြီး၊အဲဒီမှာရရန်မည်သို့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံး Wineries ပြီး၊အဲဒီမှာရရန်မည်သို့
လာရောက်လည်ပတ်သောစပျစ်ရည် ဒေသများအတွက်ဥရောပ အိပ်မက်မက်သည်တိုင်းပျစ် connoisseur. Stunningly လက်ရာမြောက်သောစပျစ်ဥယျာဉ်, ပူနွေးခြင်းနှင့်နေသာရာသီဥတုက, ဝိဇ္ဇာအတတ်အားတောင်စောင်း, နှင့်ကောင်းမွန်သောအစာအာဟာရသည်ဤထိပ်တန်းစပျစ်ရည်ကိုဒေသများတွင်သတ်မှတ်. သငျသညျစပျစ်ရည်ကိုနှစ်သက်သည်နှင့်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပြီးတော့အဲဒီမှာဘယ်လိုသွားရမလဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်, တစ်ဦးကရထား Save ကိုသင်အဲဒီမှာ get ကူညီပေးပါမည်!
ဥရောပစပျစ်ရည်ကိုချစ်သူများကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသောအရာကိုသိရန်အပေါ် Read. ဤဆောင်းပါးကိုမပြီးမီသင်၏စိတ်ထဲတွင်ထိုအရာကိုထုပ်ပြီးပြီဟုကျွန်ုပ်တို့အလောင်းအစား!
အကျော်ကြားဆုံး၏အချို့နှင့် ဥရောပအကောင်းဆုံးဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၌တွေ့ကြသည် ရှန်ပိန်. ဒါဟာ စံပြခရီး တစ်နေ့အဘို့ခရီးစဉ်မှ ပဲရစ်, ဒါပေမယ့် Reims နှင့် Epernay နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးရှန်ပိန်အိမ်များရှိပါတယ်, သင်တို့ကဲ့သို့ဂုဏ်သတင်းအမည်များကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ Veuve Clicquot နှင့် တက်တင်းထိုးခြင်း. အဆိုပါရှန်ပိန်ဒေသမကြာသေးမီကအမည်ရှိ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site ကို, ထိုဒေသတွင်ဖို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်အဓိကသရေကျထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, စပျစ်ဥယျာဉ်အပြည့်အဝလှပလှိမ့တောင်စောင်းများနှင့်အတူ.
Rhone ချိုင့်, ပြင်သစ်
အ Rhone တာင္ၾဝိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးကနေကိုပူဇော်ယဉ်ကျေးမှု အမြင် တူ عینک آفتابی زنانه ليون တဦးဖြစ်ခြင်း၏အနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ. ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူ, စစ်မှန် gastronomy, အဆိုပါ Rhone Crozes-Hermitage ၏ကျော်ကြားဝိုင်နဲ့စပျစ်ရည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရဲ့ကောငျးကငျဘုံဖြစ်ပါသည်, Cote-Rotie, Chateauneuf-du-Pape သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ၀ ိုင်ခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်သည်.
သင်ရုံသော်လည်းအချို့သောသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှာနေမယ်ဆိုရင်ကွောကျမခံစားရဘူး! အရင်ကဆိုရင်မှကျွမ်းကျင်သူများမှ, အ Rhone အများဆုံးမုချတယောက်ကိုစာရင်းထည့်ရန်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦး၏rundown ရပ်သွားဖို့ နှင့်အမှုအရာကြည့်ရှုရန်.
ဥရောပအကောင်းဆုံးဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း: Tuscany, အီတလီ
အနန်း wineries ပူဇော်ပြီးပြည့်စုံသောစပျစ်ရည်ကိုတိုင်းပြည် အတှေ့အကွုံ. Tuscany အချို့တွင်ပါဝင်သည်မသာ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးဘွဲ့, သစ်ကို Val d'Orcia ကို DOC နဲ့တူ, Vino Nobile di Montepulciano, ဒါပေမယ့်ဒေသလည်းမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အတူကွဲ, ပွညျသူပွညျသားချစ်ခြင်းမေတ္တာ, နှင့်ကြီးမားဝမ်းမြောက်သောစိတ်များဝေမျှခြင်းကအခြားသူများနှင့်အတူ.
သင်မဟုတ်ဘဲမအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထီးနန်းဝိုင် ခရီးစဉ်, သင်တစ်ဦးလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ဒရိုင်ဘာ၏ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်. များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့ ကားငှား ကလုပ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pre-စီစဉ်ထားရပ်တန့်ဖို့တဝိုက်ကျွန်တော်တို့ကို ယူ. , အဘယ်သူသည် Montalcino အတွက်ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းများကိုပြု၏. ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောလမ်းင်သွားတယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်မာင္းဧရိယာအတွင်းသို့မဟုတ်ချင်သောက်သောစပျစ်ရည်အစားပြောက.
သငျသညျကြိုတင်မဲအတွက်ခရီးစဉ်ဘွတ်ကင်နိုင်ပါတယ်. ကျနော်တို့ကပုဂ္ဂလိကခရီးစဉ်နှင့်အတူသွားကြဖို့အကောင်းဆုံးထင်, ဒီလိုမျိုး Montepulciano ခရီးစဉ်, Montalcino ခရီးစဉ်, သို့မဟုတ် Chianti ခရီးစဉ် Viator ထံမှ.
အဖျား: ငါတို့သည်လည်းအလွန်အမင်းနေ့တိုင်းသင်၏အကြံအစည်တစ်ခုဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနေ့လယ်စာထည့်သွင်းအကြံပြု. Tuscan ဝိုင်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်နေကြပါတယ်နှင့်အတူပျော်မွေ့ အစာ.
ဥရောပအကောင်းဆုံးဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း: Mosel, ဂျာမနီ
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည့်ဂျာမနီနိုင်ငံသည်၎င်း ဘီယာ နှင့်ကားများ, ဒါပေမယ့်ယခုတိုငျအောငျ, ကျနော်တို့ကိုသူတို့အရမ်းတစ်ကန်-မြည်းကိုစပျစ်ရည်ကိုဒေသရှိသည်မသိခဲ့ပါ.
အကြား Koblenz နှင့်နယ်စပ် လူဇင်ဘတ် ဂျာမဏီရဲ့ရှေးအကျဆုံးစပျစ်ရည်ကိုဒေသတည်ရှိသည်. ပြီးပြီ, အမြင်အလားအလာအတွက်အနွေးရာသီဥတုနှင့်အာဟာရကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာတွင်. ယနေ့တွင်, အဆိုပါ Moselle ဒေသ၏စပျစ်ဥယျာဉ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး Rieslings အချို့ကိုထုတ်လုပ်.
ကနေရှေးခယျြဖို့အတော်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း၏ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Weingut Willis Schaer. တစ်ဦးက နောက်ကျောမှစတငျရကြောင်းသေးငယ်တဲ့စပျစ်ဥယျာဉ် 1121. အ Schafer မိသားစု အများအားဖြင့်ပေါ်မှီခိုသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားအရသာ၏ဥာဏ်နှင့်၎င်းတို့၏အူဗီဇမှကြွလာသောအခါအဆုံးအဖြတ်အကောင်းဆုံးအချိန်မှရိတ်သိမ်းသီးအသီးအပိုင်းသူတို့စပျစ်နွယ်. ဘယ်ဟာကျနော်တို့ badass ထင်တယ်!
အဆိုပါမိသားစုသီးသန့်သူတို့ရဲ့အပေါ် Riesling ထုတ်လုပ် 4.2 အချဉ်ဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအကြားပြီးပြည့်စုံချိန်ခွင်လျှာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိကြသည့်မြေယာများဟက်တာ. ဝေဖန်ခံနေရသည့်ဝိုင်များကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်. သင်တို့အပေါ်မှာ-site ကိုစပျစ်ရည်ကိုမြည်းစမ်းဖို့လိုပါလျှင်, ကြိုတင်ရက်ချိန်းစာအုပ်ဆိုင်သေချာပါစေ.
ဥရောပအကောင်းဆုံးဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း: Lavaux, ဆွစ်ဇာလန်
သူရဲကောင်း viticulture: ဒါဟာခက်ခဲရှုခင်းများ၏လယ်ယာစိုက်ပျိုးကိုဖော်ပြရန်မကြာခဏအလုပ်တခုထားသောစာပိုဒ်တိုများဖွင့်. Lavaux, ဆွစ်ဇာလန်ဿုံအယူအဆအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်.
Lavaux တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဝိုင် ၏ Sub-ဒေသ Vaud, ရေကန်ဂျီနီဗာ၏မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, ဆွစ်ဇာလန်. ဤသည်ဧရိယာ, ထားသောသောအအားက်အနေအထားတွင်အရှေ့တစ်ဝက် အင်းအိုင်, steely အဖြူရောင်ထုတ်လုပ်ဘို့လူသိများသည် ဝိုင်, အဓိကအားဖြင့် Chasselas စပျစ်သီးထဲကနေ.
သင်၏မျက်စိသည်၎င်း၏မတ်စောက်သောကျန်ကြွင်းသောအရပ်တို့အပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သင်ကလူအပေါင်းတို့၏လက်တွေ့အားဖြင့်ဒဏ်ခတ်နေ. (အထူးသဖြင့်စပျစ်ရည်ကိုအနည်းငယ်ပုလင်း post). အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် တစ်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များအဖြစ်ယူနက်စကို, ဂျီနီဗာရေကန်၏ဤနေရောင်ခြည်ကောင်းသည့်ဘက်ခြမ်းသည်ပန်းနှင့်ပြည့်သောလသာဆောင်များကိုရေးဆွဲထားသောပုံပြင်ဖြစ်သည်, သာဒေသခံ Chasselas တစ်ဖန်နှင့်အတူနောက်ထပ်စုံလင်နိုင်အပြာရောင်ရေကို shimmering. အလားတူပင်, ၎င်းရေကန်-ကြံစည်မှုပျံမှာ အစွန်းရောက် သာတောင်ဆိတ်သငယ်နှင့်အဖွဲ့သည်ရိတ်သင့်ကြောင်း slants.
11 ရာစုအတွင်းမှာတော့, ဤကျယ်ပြန့် hillsides အ Benedictine နှင့် Cistercian ယန္စီ. ဒါဟာ Vista လောကထဲကလူတော်တော်များများရှိသည်ဟုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစပျစ်ဥယျာဉ်သို့ယခင်ကသစ်ပင်ထူထပ်သောဒေသတွင်လှည့်ခဲ့သောသံဃာတော်များခဲ့သည်.
ဤသည် Lausanne မှချဉ်းကပ်မှုအပေါ်ရထားပြတင်းပေါက်ထဲကမျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်:
Lausanne မြို့ဿုံ Lavaux များထဲမှအဆုံးမှာတည်ရှိသည်. ဒါဟာကောင်းတစ် ဦး vantage အချက်စေသည် ရှာဖွေစူးစမ်း ထိုဒေသ. ဆွစ်ဇာလန်အတွင်းမှာပဲ, ဒါကြောင့်စပျစ်ဥယျာဉ်မှကြွလာသောအခါ Lausanne အမှန်တကယ်အများစုပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်. (ကွန်မြူနတီသည်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သောဒေသကိုပိုင်ဆိုင်သည်ထက်နည်းသည် 62 ဘောလုံးလယ်ကွင်း, 400 အထိထုတ်လုပ်’000 နှစ်စဉ်ပုလင်း။)
သင့်ရဲ့အိတ် Back နှင့်သင့်ဖန်အားသွင်း. ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကြည့်ရှုရန်ရထားတစ်စင်းသို့မဟုတ်နှစ်စီးလောက်ဖမ်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီ. တစ်ဦးကရထား Save သင့်အားလျှို့ဝှက်ကြေးများမပါသည့်မြန်ဆန်။ လုပ်ရလွယ်သောလက်မှတ်များကိုပေးလိမ့်မည်. မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင်၏စပျစ်ရည်ရရန်အချိန်, အပေါ်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်အကောင်းဆုံး Wineries ပြီး၊အဲဒီမှာရရန်မည်သို့ပေါ်သို့သင့်ဆိုဒ်? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#EuropeWine #TrainandWine #ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း #winetasting #winetastinginEurope europetravel ဝိုင် winetour